Mobile e-learning Classes – မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်သင်တန်းတက်မယ်။ | E-Learning Myanmar and Training Centers | Pro Net | E-Learning Myanmar and Training Centers | Pro Net
Mobile e-learning Classes - မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်သင်တန်းတက်မယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်လာသောလူမူနေထိုင်မှုဘဝနှင့်အညီ မိုဘိုင်းဖုန်းပညာရေးမှာလည်း ထိရောက်အသုံးဝင်သော ပညာရေးကွန်ယက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဖုန်းအသုံးပြုသူအရေအတွက်များ နိုင်ငံတဝန်းများပြားလာခြင်း နှင့် သင်ယူရာတွင်အချိန်နေရာ ၊ ဒေသကန့်သတ်မှုလုံးဝမရှိခြင်းတို့ကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှလူငယ်များ ၊ လူလတ်ပိုင်းများအားထားရာ နယ်စည်းခြားနားခြင်းမရှိသော အားလုံးတန်းတူညီမျှပါဝင်နိုင်​သော ပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိ၏ဖုန်းဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက်တက်ရောက်လိုသော သင်တန်းများကို သင်တန်းစရိတ်သက်သက်သာသာဖြင့် သင်ယူလေ့လာနိုင်ခြင်းကြောင့် နယ်မြို့များတွင်ကျောင်းတက်နေသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းပြီးအလုပ်တန်းရအောင် ၊ လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေပြီး ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်သော ရာထူး ၊ လစာများရရှိစေရန် ပြင်ပသင်တန်းတက်ရောက်ရန် အချိန်နည်းပါးသူများအဆင်ပြေအောင် မိုဘိုင်းပညာရေးမှကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Mobile e-learning Classes
Mobile e-learning (ones of E-learning), or m-learning, isapersonal, unobtrusive, spontaneous, “anytime, anywhere” way to learn and to access educational tools and material that enlarges access to education for all. It reinforces learners’ sense of ownership of the learning experience, offering them flexibility in how, when and where they learn.
In developing countries like Myanmar, mobile e-learning technologies (ones of E-learning) potentially deliver education without dependence on an extensive traditional communications infrastructure, leapfrogging some of the intervening development phases encountered in developed countries such as installing extensive electricity power grids, and building multiple computer rooms in educational institutions.
ဇူလိုင် 16, 2017
2တုံ့ပြန်မှု "Mobile e-learning Classes - မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်သင်တန်းတက်မယ်။"
Nwayla Choအောက်တိုဘာ 31, 2017 at 12:00 မနက်ပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။